विदेश यात्रामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन अमेरिकालाई महिनौं लाग्न सक्छः फाउची :: Setopati
एजेन्सी न्यू योर्क, असार १
कोरोना भाइरस महामारी विरूद्धको लडाईंको अग्रमोर्चामा रहेका शीर्ष अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारी डा. एन्थोनी फाउचीले मुलुकमा कोरोनाको संक्रमण नरोकिएकाले विदेश यात्रामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन अमेरिकालाई महिनौं लाग्न सक्ने बताएका छन्।
'संसारका कयौं मुलुकमा लकडाउन हटाएपछि संक्रमणको दोश्रो लहरको खतरा बढेको देखिरहेका छौं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, डाक्टर फाउची र रोग नियन्त्रण केन्द्रले यस बारेमा चेतावनी दिएका छन्। के यसका अलवा अर्को चेतावनीको आवश्यक्ता छ र? संसारभर देखिन थालिसक्यो। यसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिदैन', उनले भने।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ३२, २०७७, २१:३७:००